कपिल शर्मा पनि हलिउड फिल्ममा देखिँदैFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
कपिल शर्मा पनि हलिउड फिल्ममा देखिँदै
फिल्मी फण्डा । बलिउड नायक नायिकाहरु हलिउड फिल्म खेल्ने ट्रेण्ड पहिले देखि नै चलिआएको हो । यहि ट्रेण्डमा अब कमेडियन तथा अभिनेता कपिल शर्मा पनि घुल्ने भएको छ । कपिल शर्मा जति नै विवादमा तानिए पनि उनको सफलताको उडानलाई भने कसैले रोक्न सकेका छैनन् ।
‘दी कपिल शर्मा शो’ बाट निकै चर्चा कमाएका कपिल पछिल्लो समय सुनिल ग्रोबर ( डा. गुलाठी ) सँगको झगडा पछि निकै विवादमा तानिएको थियो । उनको दोस्रो फिल्म ‘फिरंगी’ यही डिसेम्बरमा रिलिज हुने भएको छ र अहिले उनलाई हलिउड फिल्मको प्रस्ताव समेत आएको छ ।
एक पत्रकार सम्मेलनमा फिल्म ‘फिरंगी’ का निर्देशकले अहिले कपिलको हलिउड निर्मातासँग कुराकानी भइरहेको बताएका थिए । ‘ब्याड मामाज’ कम्पनीले आफ्नो श्रंखला फिल्ममा कपिललाई प्रस्ताव गरेको उनले बताए । कपिल शर्मा ले पनि उक्त प्रोजेक्ट बारे यसो भनेका छन् – ‘हो मलाई प्रस्ताव आएको हो, तर अझै टुँगो लागेको भने छैन,’ उनले भने, ‘फाइनल भएपछि म जानकारी गराउँछु।’